11 Na wɔde demmire bi a ɛte sɛ poma+ maa me, na ɔkae sɛ: “Sɔre susuw Onyankopɔn asɔrefie+ no kronkronbea ne afɔremuka ne wɔn a wɔresom wɔ hɔ no. 2 Na adiwo+ a ɛwɔ asɔrefie no kronkronbea no akyi no de, fa to nkyɛn koraa na nsusuw, efisɛ wɔde ama amanaman no,+ na wobetiatia kurow kronkron+ no so asram aduanan abien.+ 3 Na mɛma m’adansefo baanu+ afura atweaatam+ ahyɛ nkɔm+ nna apem ahanu aduosia.” 4 Eyinom na wɔde ngodua abien+ ne akaneadua+ abien no yɛ wɔn ho sɛnkyerɛnne, na wogyinagyina asase Wura no anim.+ 5 Na sɛ obi pɛ sɛ ɔhaw wɔn a, ogya fi wɔn anom bɛsɛe wɔn atamfo;+ na sɛ obi pɛ sɛ ɔhaw wɔn a, ɛsɛ sɛ wokum no saa kwan yi so. 6 Eyinom wɔ tumi sɛ wɔto ɔsoro mu+ na osu antɔ+ wɔ nna a wɔde hyɛ nkɔm no mu, na wɔwɔ tumi wɔ nsu so sɛ wɔma ɛdan mogya+ na wɔde ɔhaw nyinaa bi haw asase bere dodow biara a wɔpɛ. 7 Na sɛ wowie wɔn adansedi no a, akekaboa a ofi amoa donkudonku no mu+ ba no ne wɔn bɛko adi wɔn so nkonim na wakum wɔn.+ 8 Na wɔn afunu bɛdeda kurow kɛse no abɔnten so, nea honhom mu no wɔfrɛ no Sodom+ ne Egypt, baabi a wɔbɔɔ wɔn Wura nso asɛndua mu no.+ 9 Na nkurɔfo ne mmusuakuw ne kasa ne aman+ no mufo bɛhwɛ wɔn afunu nnansa ne fã,+ na wɔremma wɔmfa wɔn afunu ngu ada mu. 10 Na wɔn a wɔtete asase so no bedi wɔn ho ahurusi+ na wɔasɛpɛw wɔn ho, na wɔbɛmema wɔn ho akyɛde,+ efisɛ adiyifo baanu no maa wɔn a wɔtete asase so no ho yeraw wɔn. 11 Na nnansa ne fã+ no akyi no, nkwa honhom fi Onyankopɔn hɔ bɛhyɛɛ wɔn mu,+ na wɔsɔre gyinaa wɔn nan so, na ehu kɛse kaa wɔn a wohuu wɔn no. 12 Na wɔtee nne+ kɛse bi fii soro a ɛka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momforo mmra ha.”+ Na wɔforo kɔɔ soro wɔ omununkum mu, na wɔn atamfo huu wɔn. 13 Na saa dɔn no ara mu asasewosow kɛse bi sii, na kurow no mu nkyem du+ mu biako hwee ase, na asasewosow no kunkum nnipa mpem ason, na wɔn a aka no bɔɔ hu, na wɔhyɛɛ ɔsoro Nyankopɔn anuonyam.+ 14 Mmusu+ a ɛto so abien no atwam. Hwɛ! Mmusu a ɛto so abiɛsa no reba ntɛm. 15 Na ɔbɔfo a ɔto so ason no hyɛn ne torobɛnto+ no. Na nne akɛse gyigyee soro sɛ: “Wiase ahenni ayɛ yɛn Awurade+ ne ne Kristo+ no dea, na obedi hene daa daa.”+ 16 Na mpanyimfo aduonu anan+ a wɔtete wɔn nhengua so wɔ Onyankopɔn anim no de wɔn anim butubutuw hɔ+ som Onyankopɔn,+ 17 na wɔkae sɛ: “Yɛda wo ase,+ Yehowa Nyankopɔn, ade nyinaa so Tumfoɔ,+ wo a na wowɔ hɔ,+ na woda so wɔ hɔ, efisɛ woafa wo tumi+ kɛse no na woafi ase redi hene.+ 18 Nanso amanaman no bo fuwii, na w’ankasa w’abufuw ne bere a ɛsɛ sɛ wubu awufo atɛn no bae, na wode akatua+ ama wo nkoa adiyifo+ ne akronkronfo ne wɔn a wosuro wo din, nketewa ne akɛse,+ na woasɛe+ wɔn a wɔresɛe asase no.”+ 19 Na wobuee Onyankopɔn asɔrefie no kronkronbea a ɛwɔ soro+ no, na wohuu n’apam adaka+ no wɔ n’asɔrefie no kronkronbea hɔ.+ Na anyinam ne nne ne aprannaa ne asasewosow ne amparuwbo kɛse bi bae.